Kabaja Ayyaana Maariyaamii Haadha Hundaa (ብዙኃን ማርያም) – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Kabaja Ayyaana Maariyaamii Haadha Hundaa (ብዙኃን ማርያም)
October 2, 2017 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Duuka bu’aa wareegamaa Qulqulluu Pheexiroos kan ture Aariyoos Kitaaba Fakkeenyaa Abbaa ogummaa Solomoon irraa jecha “Waaqayyo hojii isaaf daandii isa jalqabaa taasisee na uume”. ( K.Fakk 8:22) jedhee barreesse irraa ka’uun galanni Waaqayyoof haa ta’uutii Aariyoos ‘Ilmi Uumamaadha’ jechuun gane. Barumsa shakkii isaas barsiisuu eegale. Summii barumsa isaatiinis tajaajiltoota Mana kiristaanaa gidduutti waldhabbii uumee ture. Abbootiin Mana Kiristaanaas yoo isa barsiisanis, itti dheekkamanis fudhachuu fi amanuu ni dide. Barnoota Shakkii isaas babaldhisuun itti fufe. Sababa kanaanis Phaaphaasiin Iskiindiriyaa Illeskindiriyoos (328-342BA) Aariyoosiin amantootarraa foo’ee adda baase Bara 325 B.A, Sababa shakkii Aariyoosiin Mootiin Roomaa Qusxinxiniyoos Niiqiyaatti akka yaa’iin taasifamu laabsii labsuun Hayyoonni Mana kiristaanaa 318 ta’an walitti qabamuu danda’aniiru. Sababni yaa’iin kun Niiqiyaatti ta’uu danda’eef Niiqiyaan namoota hundaaf giddugaleessaaf mijattuu, akkasumas keessummoota haala gaariidhaan keessummeessuu ni dandeessi jedhamee waan itti amanameefidha. Yaa’ii kana irratti akkuma duuka bu’ootaa, du’aa kan kaasan, naafa kan diriirsan, qaroo dhabeessaaf qaroo kan laataniifi, raajii gara garaa kan hojjettan kan irratti hirmaatan yoo ta’u sababa amantaa isaaniif gidiraa heddus kan argan turani.
Hayyoonni kunniin erga kadhannaan turanii booda Sadaasa gaafa guyyaa sagalii gaggeessummaa Qusxinxiniyoosii fi Afa-yaa’uummaa Illeskindiriyoosiin hogganamaa sagantaa isaanii eegalan. Mootichis maqaa keessan, biyya irraa dhuftan fi amantaa keessan barreessaa fidaa yommuu jedhuun Abbootiin 318 amantaa isaani “Gooftaa keenyaa fi qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Waaqummaa isaatiin (amalummaasaatiin) Abbaa wajjiin kan walqixxaatu jechuun Ilmi Abbaa waliin aangoon, waaqummaan, amalummaan, addunyaa uumuun, bulchuu fi jiraachisuun tokko” ta’uu isaa ibsanii barreessanii kennaniif. Mootichis Amantii akka Abbootii 318’ jechuun laabsii labsisiise. Abbootiin kunniin fakkeenya ijoollee Abrahaam seera uumamaa irratti caqasamaniiti. (Uma 14:14). Abbootiin 318’n kunneen Shakkaa Aariyoos tokkummaa isaanii keessaa foo’uun “Hundumaa kan uume Waaqa tokko kan ta’u Waaqayyo Abbaatti ni amanna. Samii fi lafa kan uume, addunyaa muul’atuuf hin muul’anne osoo hin uumamin isa wajjiin kan ture Ilma abbaa kan ta’e Waaqa tokko Iyyasuus Kiristoositti ni amanna” jechuun bu’uura Amantaa fi murtiiwwan biroo tokko tokkos murteessaniiru. Abbootiin hedduun akkanatti walitti kan qabaman Fulbaana gaafa guyyaa digdamii tokkoo(21) waan ta’eef guyyaan kun moggaasa Maariyaamii Haadha hundaa jedhu argateera. Egaa nutis akkuma abbootiin keenya nu barsiisan, Kitaabni Qulqulluunis nu hubachiise, Waaqayyo uumama uumuudhaan, dabarsuudhaan, jechaan, afuuraan, lapheedhaan, jireenyaan, taayitaadhaan (aangoodhaan) Waaqummaadhaan (amalummaadhaan) tokkoodha (Uma 1:26;Yoh 14:10), akkasumas Maqaadhaan, gochaan, qaamaan, sadiidha (Mat 28:19; Isa 6:3; jennee amanna jechuu dha.
Sababiin inni lamaffaan Fannoo Gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyesuus kiristoos waliin wal qabata. Kunis akkamitti yoo jennu, yeroo warreen Waaqayyotti hin amanne biyya Misiraa irratti aangoo argatan sana Kiristaanota irratti gidiraa baay’isan. Kiristaanonni kunis yaadaan tokkoo ta’uun Mooticha Itiyoophiyaa Atsee Daawitiin akka isaan gargaaruuf iyyannoo dhiyeeffatan. Yeroo kana Laga Giyoon hanga Sinaar (Sudaan) ga’utti deemuun jalaa cufan. Jireenyi uummata Misiraa laga Giyoon /Abbayyaa/ irratti sababa bu’uureffatteef nuyi mootii Itiyoophiyaa waliin nagaa fi jaalalaan jiraachuu irraa kan hafe rakkoo biroo hin qabnu, kanaafuu lammaffaa isin hin tuqnu laga Giyoon nuuf gadhiisaa, sababa cufamuu laga kanaatiin kiristaanotnis keessa ni rakkatu jechuun kennaa wajjiin araarsituu ergan. Mootiin Itiyoophiyaas haa ta’u duraanis isin goonaan malee jechuun kennaa isaanii hunda deebisuun Laga Giyoon jalaa cufanii turan deebisanii bananiif. Haa ta’u malee Biyyi koo samiin lafaaf bokkaa ni laatti, lafti sanyii fudhatee biqilchuu diduun hongee fi beelli hammaatee waan jiruuf, mee Gooftaan akka nuuf araaramuuf Fannoo Gooftaa naaf kennaa jechuun xalayaa barreessee kennaa waliin erge. Kunis, mootichi akkuma Phaawuloos dubbate Fannoon Nageenya, badhaadhinaa fi abdii kiristaanootaa ta’uu isaa waan beekuuf. (Efe 2:14; Gal 6:14). Isaanis isaan ni barbachisa jechuun yaada dhiyaate irratti walii galuun gar-tokkee Fannoo isaa harki MirgaaGooftaa irra oole, fakkii Gooftaa fi fakkii Qulqulleettii dubroo Maariyaamii isa wangeelaawiin` Luqaas kaase waliin bakka tokkotti gochuun erganiif. Isaanis hanga Siinaar/Suudan deemuun faarfannaa fi Ililleen simatani. Yeroo kana tasa daandii irratti mootichi Atsee Daawit ni boqote. Du’a mootichaa irraan kan ka’e Fannoo kiristoos waggoota 30f gammoojjii siinaar/Suudan keessa ture.
Ilmi Atsee Daawiti Mootichi ZaraYaa’iqoob (Bara 1427-1440 BA Kan Bulche) yeroo aangoo qabatu Fannoo Kiristoos gammoojjii Siinaari/Suudan keessaa fuudhuun eessa akka kaa’u yaadaa ture. Mootichis Fannoo Gooftaa bakkeewwan gara garaa kanneen akka Tulluu Inxooxxoo, Dabra Tsiggee, Mannaageshaa Maariyaamii, Wacacaa Maariyaamii kaa’uuf yaalee ture. Bakkeewwan caqasaman kana kaa’uuf garuu fedha Waaqayyoo waan hin turreef, Gooftaan abjuun “Fannoo koo bakkee qaxxaamuraa kaa’i jechuun’’ itti dubbate. Yeroo kana mootichis labsii labsisiisuun ayyaana taasisanii gar-tokkee Fannoo kiristoos gara kutaa biyya Walloo Ambaassal Gisheen Tulluu Kabree irra kaa’uun Mana Qulqullummaa Dubroo Maariyaam hojjechuun Fannoo Gooftaa kabajaan kaa’aniiru. Egaa seenaa kana irraa; mallattoo Fannootiin Afuurawwan hamaan hundi akka Sodaatan, dhalli namaa gidiraa Seexanaa fi rakkoo jalaa kan bahe sirna bilisa baasaa Fannoon ta’uu ni hubanna. Yoo amantiin raawwanne Fannoon Afuura hamaa akka balleessu rakkoo akka nuu irra fageessu ni qalbeeffanna. Nuyis ijoolleen Waaqayyoo mallattoo injifannoo godhannee, qabannee hanga dhumaatti deemna. Humna hamaas ittiin moo’anna.
Walumaa galatti ayyaana waggaa kana yeroo kabajnu Manaa Qulqulummaatti argamnee, jireenya bara baraa kan ta’e Wangeela Waaqayyoo barannee kabajamaa Foonii fi Qulqulluu dhiiga Gooftaa fudhannee, jireenya bara baraa dhaaluuf kan qophoofnu, akkasumas eebba, sugaa fi kabajaa haadha keenya Dubroo Maariyaamii fi Fannoo Gooftaa keenya irraa guyyaa itti argannu nu haa taasisu.
Eegumsi Waaqayyoo, kadhannaan Qulqullootaa, Araarsummaan haadha keenya Dubroo Maariyaamii nu waliin haa ta’u. Ameen!!
vToora Interneetii Waldaa Qulqullootaa barruu Afaan Amaariffaa
vBarruu Simaa-Tsidiqi Guraandhala 2001
vDirsaanii Masqalaa( kitaabaa Afaan Amaariffaa)
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2017-10-02 05:16:092018-10-26 09:20:58Kabaja Ayyaana Maariyaamii Haadha Hundaa (ብዙኃን ማርያም)
Sababa cubbuu keenyaaf inni fannoo irratti fannifamee 1Phex 2:24 QABSUURA WAREEGAMTUU QULQULLEETTII ARSEEMAA